लुकुवा बाजे - नेपाल
लुकुवा बाजेका लेखहरु
कवि पीएम केपी ओलीले चन्द्रागिरि चढेर धारा प्रवाह दसहरफे कविता फुर्‍याएपछि सहरका मै हुँ भन्ने कविहरु पनि जिल्ल छन् ।
लुकुवा बाजे, श्रावण ११, २०७५
जनताको मार्सीवाद !
चार महिनामा वाम सरकारले के नाप्यो ? सरकारलाई फुटेको आँखाले हेर्न नसक्नेले यस्ता बेतुकका प्रश्न सोझ्याउँछन् । तर, उनीहरुलाई के थाहा ! ओली सरकारले गोटापाँचे महिनामै ‘मार्सीवाद’ निर्माण गरेर आफ्नो अब्बलता दर्ज गराइसक्यो ।
लुकुवा बाजे, असार ३२, २०७५
बाउसे बनेर खेत पसेका कुनै बेलाका कृषिमन्त्री हरि पराजुली रोपाहारलाई हिलो छ्यापेको फोटा भाइरल भए । कृषिमन्त्री भएकै बखत हरिबोल गजुरेलले गमलामा रोपाइँ उत्सव मनाएर जगत्लाई मनोरञ्जन दिन कन्जुस्याइँ गरेका थिएनन् ।
लुकुवा बाजे, असार २२, २०७५
भाग्य ठूलो कि कर्म ? भाग्यलाई तुच्छ मानेर कम्युनिस्टहरुले कर्मको पक्षमा जति पनि बहस छेड्न सक्छन् । अझ नेपाली कम्युनिस्टले त जुगै बिताइदिन्छन् । तर, मुखले छि:छि दूरदूर गर्ने यही अस्वीकृत शब्द यी नास्तिकलाई खुब फापेको रैछ ।
लुकुवा बाजे, असार १३, २०७५
यत्रतत्र सर्वत्र सुनकाण्ड मच्चिरहेको छ । यस्तैमा थपिएको छ, १७ तोलाको सुनकाण्ड । विवाह मण्डपमा सञ्चारमन्त्रीकी पत्नीले पाएको दाइजो गहनाको काण्ड भने पनि हुन्छ यसलाई ।
लुकुवा बाजे, असार ६, २०७५
नाम गोरे, काम पहेंले । अर्थात्, सुन तस्करी । नाम र काम भिन्न भएका यी व्यक्तिले तस्करी गरेको सुन धुइँपताल खोज्दासमेत नभेटाएपछि अनुसन्धान समिति हत्तु भइसक्यो ।
लुकुवा बाजे, जेष्ठ १५, २०७५